Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate?
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #475
M nnọọ ebudatara B787 Dreamliner si Ricoooo na arụnyere na ya.
Otú ọ dị, mgbe na-efe efe, na njikere ozi uda ụdụ kokpiiti.
Apụghị m chọta ebe deactivate ya.
Adịghị m nwere nsogbu a na ndị ọzọ aircrafts. Nanị ihe ha na-egosipụta na alerts na ihuenyo (ala nri.)
Enyemaka ọ bụla biko.
Ndumodu ikpe azu: site FlyingFranz.
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #476
M na ya onwe-ahụ na ha na-enye aka, ma onye ọ bụla nke onwe ha, eh?
Mgbe ọzọ, e nwere oge ụfọdụ m na-abụghị kpọmkwem ụtọ nke "Bitching Betty" akpa ọchị
ọ bụghị ike. dị nnọọ Goto ụda folder maka ahụ ugbo elu, ma dezie sound.cfg faịlụ n'ihi na ugbo elu, na-agbanwe agbanwe na ẹdude filename to "filename = nkịtị"
Na kwesịrị idozi ya, m na-eche ... akpa ọchị adịghị aguputa Me on na dị ka m na mgbe nwara nke a tupu.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: FlyingFranz
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #477
Daalụ maka nzaghachi ngwa ngwa.
M na-agbalị ... Ọ dịghị mma!
E nweghị isi "Sound alerts" na sound.cfg faịlụ n'ihi na nke a karịsịa ugbo elu.
N'ihi na agbanyeghị. M ga-agbalị ọzọ site n'iji a sound.cfg faịlụ na ndị ọzọ yiri faịlụ.
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #478
M n'ezie adịghị ofufe na 787 maka eziokwu ahụ bụ na ọ bụ bụghị uru na-enwe na VA, na My echiche onwe onye. Nye m, ọ bụ ihe niile banyere-eme ka ego, na mgbe 787 nwere nso otu nso dị ka 772LR (nke anyị na-eme nwere), ọ na-apụghị na-ebu otu nọmba nke njem dị ka ị ga-ahụ na nke a screenshot .. .Kedụ pụtara obere $ maka VA.
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #498
Daalụ natara: 5
Dị nnọọ chọta ndị wav- faịlụ na simobjects / ụgbọelu / planename / ụda ma hichapụ ndị. n'ihi na ihe atụ "callout100.wav" wdg
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #499
Agbanyeghị, ọ bụghị ụda nke aka ya na-akpasu iwe, mana eziokwu ahụ enweghị ike ịgbanyụ ya na ụgbọ elu a. Enweghị m nsogbu dị na ụgbọ elu ndị ọzọ dị n'okpuru FSX.
Na B787 faịlụ, e nwere otu onye na koodu na-akpọ maka ndị a mụrụ anya ụda. ọ bụ ihe kasị akpaghasị n'ihi na ọ bụrụ ihe atụ, mkpọda bụ naanị ubé kwa nkpoda, na njikere-ada ọbụna ma ọ bụrụ na ọnụego bụ ziri ezi.
All m pụrụ ime bụ belata ụda larịị ke yiri faịlụ na isi "Ụda" nchekwa (site 10000 ala 6000.)
Ada - Mata - on B787 Olee otú na-deactivate? 1 afọ 9 ọnwa gara aga #1211
Jiri [gpws] na plane.cfg
Ọ bụrụ na ngalaba [GPWS] enweghị ike ịmepụta otu.
Nkebi nke a na-ekewapụta nkọwa nke ala usoro ịdọ aka ná ntị nso.
max_warning_height Elu nke dị n'okpuru ebe a na-arụ ọrụ ịdọ aka ná ntị.
sink_rate_fpm Ọ bụrụ na ugbo elu karịa ala a, a na-eme ịdọ aka ná ntị.
excessive_sink_rate_fpm Ọ bụrụ na ugbo elu karịa ọnụ ọgụgụ a, a na-arụ ọrụ ịdọ aka ná ntị ngwa ngwa.
climbout_sink_rate_fpm Ọ bụrụ na ụgbọ elu amalite ịdata n'oge iwepụ, ma karịa ọnụ ọgụgụ a, ọ bụ ịdọ aka ná ntị.
flap_and_gear_sink_rate_fpm Ọ bụrụ na ụgbọ elu na-asọpụta, ma karịa ọnụ ọgụgụ a nke ala na-enweghị flaps ma ọ bụ ngwa ngwa,
a na-agbalite ịdọ aka ná ntị.
; // Agha a 'ghara imetụ', 'obere flaps', wdg na-akpọ mkpu
; Site n'ikike nke & Ekelere Rob Barendgret
Oge ike page: 0.235 sekọnd